Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kolombia » Birao Fivoriamben'i Greater Bogotá: Fanentanana vaovao hanehoana ny herin'ny olona
Ho fankasitrahana ny Andron'ny indostria fihaonana manerantany, ny BestCities Global Alliance dia nanambara tetika vaovao vaovao mampihetsi-po izay hampiseho ny Herin'ny Vahoaka. Notarihin'ny Birao Fivoriambe Greater Bogotá, izay handray ny BestCities 2018 Global Forum amin'ny 9-12 desambra, ny birao dia namolavola fanentanana iray izay mikendry ny hankalaza ny andraikitra tsy manam-paharoa anjaran'ny olona amin'ny fanovana sy fandrosoana lehibe eo amin'ny sehatry ny fivoriana sy ny hetsika.
Miaraka amin'ireo tanjona 11 BestCities hafa, i Bogotá dia hampiseho ny lohahevitry ny Global Forum amin'ity taona ity amin'ny paikady nomerika mitete mitete izay hampisy teboka manerantany. Ity no fotoana voalohany nampitan'ny firaisan-kina ny lohahevitra tamin'ny hetsika isan-taona ho an'ny mpihaino marobe amin'ny alàlan'ny tetikady kendrena izay hahitana ny tanàna rehetra mizara hafatra mirindra.
Ny hetsika dia hanome fahatakarana marina sy dikany ny hery ananan'ny olona ao anatin'ny indostria iray izay afaka manova. Nandritra izay roa taona lasa izay, ny BestCities Global Forum dia nijery ny fiantraikan'ny lova sy ny maha-zava-dehibe ny fananganana tetezana ara-kolontsaina. Amin'ity taona ity, ny fiaraha-miasa dia te-hahazo antoka fa ny vahoaka no fototry ny zava-drehetra.
Dingana voalohany amin'ny fampielezan-kevitra dia hahita ireo tanàna mpiara-miombon'antoka BestCities 12, izay misy an'i Berlin, Tokyo, Vancouver, Madrid, Houston, Singapore, Melbourne, Dubai, Bogotá, Copenhagen, Edinburgh ary Cape Town, mizara sary misy fiatraikany izay maneho izay lazain'ny Hery Ny olona dia midika hoe azy ireo.
Linda Garzón Rocha avy ao amin'ny Birao Fifanarahana Greater Bogotá dia nilaza hoe: "Mino mafy izahay fa ny olona tsirairay dia manana fahefana hanao fanovana ifotony izay afaka mamolavola ny ho avy ary manao fanovana tsara. Ny olona no votoatin'ity indostria ity, ary ity indostria ity dia sambo iray hahazoana vokatra lehibe kokoa sy lehibe kokoa. Amin'ny maha-mpiara-miasa dia te-hanasongadinana ny tena herin'ny olona ao anatiny izahay ary hino fa ity fanentanana ity dia hanampy anay hanatratra an'io. ”
Paul Vallee, Tale mpitantana ny BestCities Global Alliance dia nilaza hoe: “Manao izay fara herinay foana izahay mba hiantohana ny lohahevitry ny Global Forum mifantoka amina lohahevitra lehibe iray ka faly izahay fa hifantoka amin'ny Herin'ny Vahoaka ny hetsika amin'ity taona ity. Ny hafatra tianay hampitaina dia ny hoe miaina ny ivon'ity orinasa ity ny olona ary amin'ny alalàn'ity fampielezan-kevitra ity dia manantena izahay fa hampisongadina ny fahazoana olona manentana fanahy izay miasa hanatsara ny indostria, ny hetsika ary ny vakoka noforoninay. Ny The Power of People dia lohahevitra midadasika misy heviny maro ary faly izahay fa manana paikady hametrahana ny fomba fijerinay ny dikan'izany amin'ny tanàna 12 tsara indrindra manerantany.
Ny dingana voalohany amin'ny fampielezan-kevitra dia hanomboka amin'ny 12 aprily ka hatramin'ny 14 Mey miaraka amin'ny dingana faharoa ambara tsy ho ela.
Ny ekipa BestCities sy ny tanàna mpiara-miombon'antoka dia hanatrika ny IMEX Frankfurt amin'ity taona ity. Ny fampahalalana misimisy kokoa momba izay antenaina amin'ny Global Forum natao tamin'ity taona ity tany Bogotá tamin'ny volana desambra dia haseho amin'ny sakafo maraina an'ny talata 15 Mey ao amin'ny Maritim Hotel Frankfurt, eo akaikin'ny Messe Frankfurt.
Ny CEO RAI Amsterdam dia nandefa ny hetsika 'Amsterdam City of Drones'